Sida Loogu Maamulo Imtixaanka A / B Boggaaga Degitaankaaga | Martech Zone
Sida loogu ordo Imtixaanka A / B boggaaga Degitaanka
Talaado, Disembar 16, 2014 Talaado, Disembar 16, 2014 Douglas Karr
Lander waa barxad deg deg ah oo bogga la awoodi karo oo leh tijaabooyin A / B oo adag oo ay heli karaan dadka isticmaala si loo kordhiyo sicirkaaga beddelka. Tijaabinta A / B waxay sii waddaa inay tahay dariiqa la caddeeyey ee suuqleydu u adeegsadaan inay ku cadaadiyaan beddelaad dheeri ah taraafikada jirta - waa hab weyn oo lagu helo ganacsi dheeraad ah iyadoon lacag badan la isticmaalin!
Waa maxay Tijaabada A / B ama Tijaabinta Split
Tijaabada A / B ama tijaabinta kala jaban waa sida ay u muuqato, waa tijaabo aad ku tijaabineyso laba nooc oo kala duwan oo ah bogga Soo Degitaanka isku mar. Asal ahaan wax uun kama badna dalabka habka sayniska ee dadaalkaaga suuq-geynta internetka.
Mid ka mid ah furayaasha si loo hubiyo inaad haysato xogta lagama maarmaanka u ah taageerida natiijooyinka ayaa ah cabbirka mugga booqdayaasha iyo beddelaadyada, iyo xisaabinta haddii ay jiraan iyo in kale oo ay jirto xaqiijin tirakoob oo ku saabsan imtixaanka. Qiyaasta KISS waxay siisaa hordhac weyn Sidee Imtixaanka A / B u shaqeeyaa iyo waliba qalab loogu talagalay xisaabinta ahmiyada natiijooyinka.
Marka la adeegsanayo isdhexgalka A / B ee Tijaabinta, Landers wuxuu ku socdaa isticmaalaha isagoo si guul leh u tijaabinaya boggooda soo dejinta wuxuuna siiyaa warbixin natiijada.
Had iyo jeer ku tijaabi hal shey halkii imtixaan sida qaabeynta, cinwaanka, cinwaanka hoosaadka, wicitaanka-ficilka, midabada, markhaatiyada, sawirada, fiidiyowyada, dhererka, qaab dhismeedka iyo xitaa noocyada kala duwan.
Xullo waxa aad tijaabineyso oo aad ku horumarinaysid noocyo kala duwan iyadoo lagu saleynayo dhaqankaaga isticmaale, dhaqanka ugu fiican, iyo cilmi baarista kale. Xusuusnow, kaliya hal cunsur halkii imtixaan waa in la geeyo oo la tijaabiyo.
Tijaabi imtixaanka waqti dheer oo ku filan si aad u hesho hubinta tirakoobka ee natiijooyinka, laakiin hubi inaad joojiso imtixaanka oo aad udhigto qaabkaaga guuleysta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo kordhiyo beddelaadda.
Qalabka Lander, waxaad ku abuuri kartaa kuna tijaabin kartaa illaa saddex nooc oo kala duwan oo bog kasta oo degitaan ah isla mar. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad awoodi doonto inaad ku abuurto noocyo kala duwan boggaaga soo degitaanka isla URL isku mid ah.
Tags: ab imtixaanLanderImtixaanka bogga soo degayaImtixaanka bogga soo degayakala qaad imtixaan
Aasaaska Istaraatijiyadda Iibinta Bulsho ee guuleysta
Aragtida VB: Falanqeeyayaasha oo la awoodi karo, Warbixinnada Dunida-dhabta ah
Mar 6, 2015 at 2: 25 PM
Nabadoon Douglas! Waad ku mahadsantahay sharaxaad ka bixisaa sida loo wado baaritaanka AB ee bogga degitaanka iyadoo la isticmaalayo Lander. Sharaxaad weyn iyo talooyin waxtar leh! Waxaan ku martiqaadeynaa akhristayaashaada inay tijaabiyaan tijaabadeena Bilaashka ah ee 30-Maalmood ah ayna wanaajiyaan Boggooda Soo Degitaanka. Salaan!